I-china excavator yomeleza abavelisi bamabhakethi omhlaba kunye nabathengisi | UMCINI
Iemele ye excavator
Excavator emele ehamba emele
Excavator nokomeleza umhlaba emele
Ibhakethi yelitye lokumba
Ibhakethi yokugalela umgwebi
Excavator coupler ngokukhawuleza
Izinyo leemele ze excavator
Excavator emele izinyo
excavator womeleze umhlaba emele
excavator isefu emele
Excavator rock emele
Ibhakethi elincinci lincinci elincinci lama-40 ububanzi
Inzuzo yeemveliso zethu 1) umgangatho kaZwelonke 2) Umgangatho ophezulu wezinto 3) Ukuqina okuphezulu, 4) Ukuqina okukhulu, 5) Ubomi obude kunye namandla okuthwala amandla, 6) Kudluliswe ukubek'esweni kwesebe eligunyazisiweyo. 8) Ukuzuza ukuthembela kwabathengi bakudala.
I-Excavator yomeleza ibhakethi lomhlaba linemigangatho engqindilili kunye neepleyiti zokunxiba ezisecaleni, ukuphucula ukunganyangeki kokunxiba kwaye inexesha elide lenkonzo kune-excavator ibhakethi lokuhambisa umhlaba. Olu lolona hlobo lwebhakethi ludume kakhulu. Ukhetho olufanelekileyo "lwendawo esembindini", okanye indawo yokuqala, xa iimeko zesicelo zingaziwa kakuhle.
Uluhlu olubanzi lwempembelelo kunye neemeko zokugruquka kubandakanya ukungcola okuxubeneyo, udongwe kunye nelitye. Umzekelo: Iimeko zokumba apho ukungena kwePenetration Plus kubomi obuqala kwiiyure ezingama-400 ukuya kuma-800.
I-excavator yomeleza iibhakethi zomhlaba ziyacetyiswa ukuba zenze umsele kwimisebenzi yezixhobo, nakwikontraka jikelele esebenza kwiimeko ezahlukeneyo. Izantsi ezishinyeneyo kunye neepleyiti zokunxiba ezisecaleni kuneebhakethi zoMsebenzi Jikelele ukuze kuzinze ngakumbi. Iiadaptha kunye neengcebiso zamabhakethi zikwimilinganiselo yokusebenza okuphuculweyo kunye nokuqina. Iibhola ezisecaleni ziye zacwangciswa kwangaphambili kubagawuli becala, kwaye kwiimeko ezininzi, abakhuseli bebar esecaleni.
Amandla okubonelelaAmandla okubonelela:Piece / Pieces 300 Inyanga excavator emele nganye
Ukupakisha kunye nokuhanjiswaIinkcukacha Packagingpallet ngomthiIzibukoQingdao / ShanghaiIxesha lokukhokhela :
Ubungakanani (Amacandelo) 1 - 5 6 - 10 11 - 20 > 20
Est. Ixesha (iintsuku) 15 20 30 Kuya kuthethathethwana
Xuzhou Minyan Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Co, Ltd ngumenzi ophambili weziqhobosheli ze excavator e China. Zonke iimveliso 'ziphantsi kolawulo olungqongqo ukusuka ekusetyenzisweni nasekuzisweni. Ngolwenziwo oluqhubekayo kunye nokuphuculwa, inkampani ifumene Izatifikethi ze-ISO 9001, ze-CE kwaye amalungelo awodwa omenzi wechiza ngokulandelelana. Iimveliso zethu zithengisiwe kubathengi basekhaya nabaphesheya ngokubanzi kwaye intsebenziswano yexesha elide iphuhlisiwe Umnqophiso wethu: Umgangatho wokuqala, eyona nto iphambili kwinkonzo, kunye neyona nto ibalulekileyo Ukuzibophelela okungagungqiyo kumgangatho ophezulu kunye nenkonzo yokucinga kusizuzela igama elihle kunye namaqabane ezayo. Kwaye siya kuhlala siphucula iimveliso ukuze sikhonze ngcono kwimarike zehlabathi. Sijonge ukusebenza nawe!
Le bhakethi yenzelwe ipini enelungelo elilodwa lomenzi ukubonelela ngokumba okuphezuluukusebenza ngelixa kugcinwa ukungaguquguquki kunye nokwenza lula kokudibanisa. Ingcebiso ye radius yileincitshisiwe kwaye ivumela ukuya kuthi ga kwiipesenti ezili-10 zokuphucula amandla okuphumla xa kuthelekiswa ne-Iipini eziqhelekileyo kwibhakethi kunye nokudibanisa ukudibanisa.I-Pin Grabber Performance Buckets ziyafumaneka kwii-315-349 zokumba, ngokubanziInjongo kunye nokuqina koXanduva loMsebenzi.
Ukusebenza kwePin Grabber
Amandla eBhakethi asetyenziswa kwizicelo ezirhabaxa apho amandla okuphumla kunye namaxesha okujikelezazibalulekile- kwaye zisetyenziswe kwizixhobo ezinjengomhlaba odityanisiweyo odityanisiweyo nelitye. (Hayi() (kucetyiswa udongwe.) Amandla okuphuma ayandiswa ngenxa yokuncipha kwethiphu radius kwayeukwanda kwepini. Amaxesha okujikeleza komatshini kuninzi lwezinto ziphuculwe ngaphezulu komgangathoibhakethi kwisicelo esifanayo.AmaBhakethi oMsebenzi oNzima aSebenzayo afumaneka kwizimbiwa ezingama-320–336
Umthamo oPhezulu weeBhakethi uyilelwe kwaye wakhelwe ukusetyenziswa kulayisho oluphezulu lweeloriizicelo. Ngesicelo esifanelekileyo kunye nokuseta, ezi bhakethi ziya kuhamba ngakumbingesixa esincinci sokupasa-ukwandisa imveliso.AmaBhakethi aMandla aPhezulu afumanekayo kwizimbiwa ezingama-336--390, kuQinisekiso loMsebenzi Jikelele.
Egqithileyo isixhobo sokumba
Okulandelayo: Excavator emele izinyo
Excavator Rock Screening Indlu
Indlu yokuhlola yokumba
Ibhakethi elincinci lincinci encinci engama-70 ububanzi
HLALA UKUHLAWULA NATHI
Iibhakethi zethu zokumba-isiQinisekiso se-quali ...
XUZHOU MINYAN Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle CO., LTD. imi kweyona sixeko idumileyo oomatshini bokwakha Xuzhou, China. Njengomatshini wokwakha oqeqeshiweyo kunye nokuthumela ngaphandle, uMinyan uneminyaka emininzi yokuthengisa ...
Luluphi udidi nemisebenzi ...
Abembi basebenza kwizihlandlo ezahlukeneyo kwaye baya kukhetha izixhobo ezahlukileyo zokwenza izixhobo, izixhobo eziqhelekileyo ezinje ngamabhakethi, iziqhekezi, iiripers, izibopho zamanzi kunye nokunye. Ngokukhetha kuphela ...
Yintoni ubume bezinto kunye nokusetyenziswa ...
I-emele ibhekisa kwilungu elime okwebhakethi elisetyenziselwa ukugrumba izinto ezikhululekileyo ezifana nomhlaba, isanti etyheli, amatye kunye nenkunkuma yokwakha. Yenziwe ngeplate esezantsi, ipleyiti yodonga, ipleyiti yendlebe, indlebe p ...
- Imephu yendawo